Jare Ijalana: 5 gabar Nigerian ah ayaa doortay "gabar qurux badan oo qurux badan" - TELES RELAY
ACCUEIL » kale • beauty Jare Ijalana: 5 gabar Nigerian ah ayaa doortay "gabar yar oo qurux badan oo adduunka ah"
Jare Ijalana: 5 ee gabadha Nigerian ayaa u codeeyay "gabdhaha ugu quruxda badan aduunka"
ALEXIS WAYAN 15 March 2019
Internetka oo dhan waa la yaabay sawirada Jare Ijalana oo ah gabadh reer Nigeria ah oo 5 ah. Sawir qaade Mofe Bamuyiwa, cunuga wuxuu helay magaca "gabar qurux badan oo qurux badan" adoo isticmaalaya internetka.
Dhammaantood waxay bilaabeen marka sawir qaade Mofe Bamuyiwa, oo ku takhasusay sawirada arooska, ayaa daabacday sawirada yar yar ee Jare, 5 da, Instagram. Aragtidiisa qarsoodi ah iyo joogitaan aan la loodin karin ayaa si deg deg ah uga codsaday dadka isticmaala Internetka.
"Haa, waa nin," ayaa sawir qaade ku qoray boggiisa. "Waxaan doonayay inaan qabsado is-goyska caruurnimada iyo qaan-gaarnimada, si ay labadaba u noqdaan kuwo aan waqti lahayn. Waan ka dhigi lahaa dhoola caddayn iyo qosol, laakiin waxaan go'aansaday in aan dareemo dabeecad. Sida qof weyn. Waa sawir aan waqtigeeda laheyn, "ayay tidhi. Sawirkii hadda ku jira 40 000" Waan jeclahay "ayaa ku wareegay internetka. Dhammaan dadka isticmaala Internetka ayaa isku raacay in ay doortaan gabadha 5 gabadha ugu quruxda badan aduunka.
Jare wuxuu ku noolaa Niger wuxuuna la leeyahay labadiisa gabdhood, Joba iyo Joliloju. Akhbaarta Instagram ayaa dhawaan la furay saddexda gabdhood ee yar yar, " Walaalaha J3 Yaa hadda noqday noocyo.
2017, waa gabadha Ruushka ah Anastasia Knyazeva kuwaas oo helay magaca aan rasmiga ahayn ee "gabadha ugu quruxda badan aduunka".
Singer R. Kelly ayaa sii deysay kadib markii ay bixisay taageero ilmo
Cameroon: Abel Elimbi Lobe ayaa ka qeyb qaadan doona xaflad ay soo abaabuleen Jean De Dieu Momo si ay ugu mahadceliyaan Paul Biya